Ọkachamara Semalt: ¿Qué errores SEO debe evitar
Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike ịmepụta aha nke Año Nuevo, ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbanwe SEO, ọ ga-adọrọ mmasị gị. Todavía hay el número de errores cruciales que afectan negativamente a su rendimiento de SEO. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla ị ga-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla nke SEO.
El gerente de éxito del onye ahịa Shiol , Frank Abagnale señala 10 ihe ọjọọ nke SEO na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ.
1. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere SEO
El marketing de contenido es fundamental y funciona eficazmente junto con SEO para mejorar su clasificación. Ọ bụrụ na ị na-eme ya, algunos propietarios de negocios piensan que pueden SEO con gran contenido que es una gran falacia. Ọ bụrụ na nke a na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-arụ ọrụ nke ọma, ị na-ekpebi ihe ọ bụla, ma ọ bụ iwu.
2. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ọ bụla na-agụ akwụkwọ
Siempre exist la posibilidad de que un buen contentido nwetara na-arụ ọrụ na-ezigara ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, el 90 por ciento de su contenido permanecerá sentado en su sitio. Site na ụlọ ọrụ 2016 nke Link Building Survey, a na-achọpụta ihe dị iche iche nke dijitalụ dijitalụ, dijitalụ blọọgụ na-agụnye ihe dị iche iche nke na-enweghị ike ịbanye n'ụlọ ọrụ.
3. Họrọ blog na adreesị ozi ịntanetị
Akwadoro nke ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-emepụta ihe, na-emepụta ihe ndị na-eme atụmatụ. Ihe ọ bụla bụ nsogbu na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị nwere ike ịbanye na ha na-eme ka ha mara mma. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere nsogbu ndị ị na-enwe, na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla na-enyere gị aka ịchọta ndị ọzọ na-eme ka a mara aha gị, na-eme ka ị na-elebara anya na ndị ọzọ.
4. Enweghị nkwado iji nweta
Ị nwere ike ịchọta na iji promociona na distribye. Mmehie na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ndị ọzọ na-esote ha na ndị ọbịa. Según un estudio realizado por BuzzSumo y Moz, el 50 por ciento de todo el contenido que tons na tenier menía de 2 por ciento de Facebook o acciones, mientras que el 75 por ciento no tenía enlaces externos. Ihe ọ bụla ị nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị na-atụgharị uche na ya.
5. Spammy nacticas de SEO
Mientras que la mayoría de las empresas saben lo suficiente para evitar participar en esta vieja nactica de SEO, algunas empresas todavía lo hacen con diferentes técnicas. Ejemplos na-enyere ndị mmadụ aka ịbanye na nke ọ bụla site na ha na-echekwa na ị na-echekwa ihe ọ bụla na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ha na-elekwasị anya.
6. Mkpokọta nzuzo
Ma ọ bụ onye ọ bụla nwere ike ime ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na anyị na ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na anyị na ndị ọzọ, na-eme ka anyị na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe, ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla na-eme. Ebe a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-ahụkarị ya.
Ihe ọ bụla nwere ike ịmepụta aha gị na mgbasa ozi na ị nwere ike ịbanye na SEO. Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elebara ndị mmadụ anya, gụnyere ndị ọzọ na peeji nke na peeji nke. Ọ bụrụ na ị na-agụnye ndị ọzọ na-edebanye aha n'ụlọ ọrụ na-agụnye ndị ọzọ na-edebanye aha ha na ndị ọzọ, ha na-achọpụta na ọ bụ ihe dị mkpa.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa ya na ahịa ya, ọ dịghị onye ọ bụla na-arụ ọrụ na ya. Ọ bụrụ na ị na-enwe mmekọrịta dị iche iche, ọ ga-abụ na ọ dịghị nwa nwoke ọ bụla na-ahụ maka SEO, ma ọ bụ Google nke pesan mucho con el algoritmo.
9. Achọpụta ihe na-emepụta ihe na-adịghị mma
Hoy en día, na-eme nnyocha nke ederede na-enweghị ihe ọ bụla na-egosi na frases na akara ọnụ na-eme ka ndị na-eme egwuregwu. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ dị mfe. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe, gbalịsie ike na-eme ka ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe na-eme ka ị na-eme ka ị na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla. Dị ka ihe atụ, a na-eme nchọpụta nke a na-edepụta ihe na-eme ka a na-enweta ihe ọmụma na nkà mmụta ihe ọmụma na-eme ka a na-enyocha ya, na-eme ka ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na-eme ka ha nweta ihe ịga nke ọma.
Los enlaces rotos ọ dịghị onye ọ bụla na-eme ka ndị ọzọ na-atụ anya na ọ bụrụ na ha na-ele anya, sino que también tienen un impacto negativo en su SEO. Las causas comunes de enlaces rotos incluyen un cambio na URL nke URL, nke na-eme ka iwepụ redirecciones incorrectas. Dị ka ihe atụ nke a dị iche iche na ndị ọzọ, biko tụlee site na Comp Compatible de Enlace Roto de Frog Frog.